ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေအနေမကောင်းကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ၀န်ခံပြောကြား (ရုပ်သံ)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေအနေမကောင်းကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း ၀န်ခံပြောကြား (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:23 AM
WHY so late announce that ..how bad and unfair changed dress leaders...we know u all afraid to be like Libya...so very very quickly correct words using after u eat and took all fully in ur pocket.. laws are just in books...and all ur hands are use to open and collect bride....how u can change it..that bad character is already planted in all citizens blood..bec u used to show it.. ONLY ONE THING.. (clean the burma plot by cutting all bad gene trees and destory all seed by burn then plant new seed...)never never can happen ..just dream..
Lousy Idiot ! ! အခုမှသိလား နှစ်တွေကြာနေပြီ အဘိုးအဘွားသေလို့ အဖေတောင်အိုနေပြီ
ငါလည်းတတိယအရွယ်ကိုရောက်နေပြီ အော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ
သြော်.. မောင်ရွှေမန်းရယ် ဒီစကားလုံးလေတွေနဲ့ ပြည် သူတွေကို မလှည့်ဖြားပါနဲ့ ဗျာ.. တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေအနေမကောင်းတာ မဟုတ်ဘူးးး ပျက်နေတာတောင်မဟုတ်ဘူးးး ရှိကိုမရှိတာ ပါဗျာ..
I do supported this three Comments.
လူမှုရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့ပြီးစောင့်ကြည့်အရေးယူခွင့်ပြုသင့်တယ် အဲ့ဒီအထဲမှာရှေ့နေတွေလဲမပါစေရဘူး ဒါမှလွတ်လပ်ပြီးမျှတမယ်
Offcourse U Shwe Mun, inclusive you.